Shwepalin (Shop 10 - Union Financial Center) | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Shwepalin (Shop 10 - Union Financial Center) | Botataung
Shwepalin (Shop 10 - Union Financial Center)
မြန်မာအစားစာ / ကဖီး
ရွှေပလ္လင် Tea House ကို ၂၀၀၇ ခုနစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စားသုံးသူများဧ။်နှစ်ခြိုက်စွာ အားပေးမှုများနှင့်အတူ ယခုအချိန်ထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၁၂ဆိုင်နှင့် အောင်မြင်စွာရပ်တည်နေပါတယ်။ သန့် ရှင်းသပ်ရပ်သောနေရာထိုင်ခင်း၊ ရိုးရုင်းသောဆိုင်အပြင်အဆင်နှင့် လတ်ဆတ်ပြီးအရသာရှိသောအစားအသောက်များရရှိသောကြောင့် မိသားစု (သို့)သူငယ်ချင်းများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ စားသောက်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာထမင်းဟင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ မုန်မျိုးစုံ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့် ရာသီပေါ်သစ်သီးဖျော်ရည် စတဲ့ စုံလင်သောအစားအသောက်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အလှူ မင်္ဂလာပွဲများအတွက်ကိုလည်း အစားအသောက်အော်ဒါများကို လက်ခံစီစဉ်ပေးပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် အရောင်းရဆုံးအစားအသောက်များမှာ ရွှေပလ္လင်လက်ဖက်ရည်၊ ရွှေပလ္လင်ကော်ဖီ၊ နံရိုးပေါင်းကော်ရည်၊ ဝက်သားပေါင်း နှင့် ပေါက်စီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစားစာ | ကဖီး
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ | ရှမ်း အစားစာ | ဒင်းဆန်း | အချိူပွဲ | ဟင်းပွဲအသေး | ပေါင်မုန့် | သစ်သီးဖျော်ရည် | အအေး | အချိူပွဲ
ပြင်ပ သို့ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။ | ကားရပ်ထားရန်နေရာ | လေအေးပေးစက်
စုံတွဲ | အဖွဲ့လိုက်၊ပါတီ | နိုင်ငံခြားမှလာရောက်လည်ပတ်သူ | စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် | အမျိူးသား | အမျိူးသမီး | သင်တင့်သောဈေးနှုန်း
09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
4th floor, UFC Building, Corner of Thein Phyu Rd. & Maharbandula Rd., Botahtaung Tsp.
အနီးအနား 46 streets မှတ်တိုင်4မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( 47 ROAD)